February | 2010 | Moep1's Blog
Comments Off on EP-1, YUPD ink Supplementary Agreement for Shweli-1	| ရွှေလီ(၁) Shweli-1	| Permalink
Comments Off on MoU on implementation of coal-fired Thermal power plant (Yangon) signed	| အထွေထွေ (General News)	| Permalink
EP-1 Minister receives Vice-President of CPIC
(NAY PYI TAW,9Feb, 2010)
Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min received Vice-President Mdm Zhang Xiaolu and party of China Power Investment Corporation (CPIC) of the People’s Republic of China at the ministry yesterday evening.
Also present at the call were departmental heads and officials.
Comments Off on EP-1 Minister receives Vice-President of CPIC	| အထွေထွေ (General News)	| Permalink
ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ လျှပ်စစ်(၁)၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း အမှာစကားပြောကြား
(နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်)
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ရေးဌာန (ပေါင်းလောင်း) ၏ ကွန်ပျူတာ အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၈) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါဌာန သင်တန်းကျောင်းခန်းမဆောင်၌ ကျင်းပရာ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း တက်ရောက်၍ သင်တန်းဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများနှင့် လုပ်ငန်းဌာနတို့မှ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ သင်တန်းနည်းပြဆရာ ဆရာမများနှင့် သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ၃၀ တက်ရောက်ကြပြီး သင်တန်းကာလမှာ ရက်သတ္တလေးပတ် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Comments Off on ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ လျှပ်စစ်(၁)၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း အမှာစကားပြောကြား	| အထွေထွေ (General News)	| Permalink
You are currently browsing the Moep1's Blog blog archives for February, 2010.